Cali Xaaji oo Dhaliilay habka loo Maray heshiiskii Gaalkacyo – Radio Daljir
Diseembar 3, 2015 1:43 b 0
Somalia, December 03, 2015-(Daljir)_ Cali Xaaji Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobalka Mudug, tartankana u galay xilka madaxtinimadda Puntland 2014 ayaa ka hadlay heshiiskii mamuladda Puntland iyo Gal-Mudug ku gaareen magalada Gaalkacyo.
Warsame ayaa sheegay afarta qodob ee labada dhinac ku wada heshiiyeen inaysan wax badan uga soo bixi karin in la dhaqan galiyo, mar haddii buu yiri aan laga qayb galin wada hadalka dhinacyadii ay qusaysey sida siyaasiyiinta, aqoon yahanka iyo dhaqanka, wuxuna sheegay goâ€™aanka Gaalkacyo iyo heshiiska inaysan cid gaar ah ka hadli karin.
Waxa uu madaxwaynaha dowladda Federaalka ku eedeeyay inuu ka aamusay dagaalkii Gaalkacyo, isagoona todobo bari ka dib ka hadlay, wuxuna sheegay xiisada laga abuuray magalada Gaalkacyo inay cadaynayso in aan la dooneyn in doorashada waqtigii loogu talo galay la qabto.
Heshiiska Puntland iyo Gal-Mudug oo ka kooban afar qodob ayaa dhigaya in ciidamada isku hor-fadhiya magalada la kala qaado, in qoysaskii barakacay dib loogu soo celiyo guryahooda iyo in xabad joojinta la dhaqan galiyo.
Cali Xaaji Warsame oo horay waraysi u bixiyayna waxa uu sheegay in la wado qorshe ciidan AMISOM ah lagu keenayo magalada Gaalkacyo.